पूजाको ध्यान कता ? - मनोरञ्जन - नेपाल
पूजाको ध्यान कता ?
प्रेमगीत व्यावसायिक रुपमा अब्बल साबित भयो । हिरोइन पूजा शर्मा आमदर्शकमाझ परिचित भइन् । तर, डेढ वर्ष लाग्यो, उनको अर्को फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु रिलिज हुन । पल शाहसँग पूजाको ‘केमेस्ट्री’ रुचाइयो । तर, फेरि उनी अन्य फिल्ममा अनुबन्ध भएकी छैनन् । जबकि, हामीकहाँ हिट मात्र होइन, फ्लप फिल्मका हिरोइनलाई पनि भ्याइनभ्याई हुन्छ । पूजाचाहिँ बिलकुल भिन्न । कतै अफर नै नआएको त होइन ? चर्चा चल्न थालेको छ । तर, यसलाई नकार्छिन् । चुलबुले भूमिकामा रुचाइएकी यी हिरोइन भन्छिन्, “आफ्नै प्रोडक्सन हाउस खोल्दै छु । मेरो फोकस त्यसमै छ । त्यसैले अरु प्रोजेक्टमा जोडिन सकेकी छैन । तैपनि, चित्तबुझ्दो स्क्रिप्ट र टिमसँग भने काम गर्न तयार छु ।”